तपाईंको,घरको वास्तुदोष हटाउन फिटकिरी, यसरी गर्नुहोस् … – News Nepali Dainik
तपाईंको,घरको वास्तुदोष हटाउन फिटकिरी, यसरी गर्नुहोस् …
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ २६, २०७७ समय: १०:३४:१३
वास्तुको नियममा घरको विषयमा थुप्रै कुरा समावेश छन् । घरमा हरेक स–साना चिजको विषयमा वास्तुको महत्व अत्यधिक हुन्छछ । यदि घरमा कुनै प्रकारको वास्तु दोष छ भने घरमा नकारात्मक ऊर्जा प्रवाह हुन्छ । साथै घरको सुख–समृद्धिमा पनि बाधा आउँछ । यद्यपि, दैनिक हाम्रो घरमा प्रयोग हुने चिजलाई ठिक गरेर वास्तु दोषलाई हटाउन सकिन्छ। हामी सबैको घरमा फिटकिरीको प्रयोग कुनै नै कुनै बेला पक्कै भएको छ । तर के तपाईंलाई थाहा छ ? घरको वास्तु दोष हटाउनका लागि फिटकिरीको प्रयोग गरिन्छ ? यस्तोमा हामी तपाईंलाई यसैबारे जानकारी दिँदै छौं कि फिटकिरीमार्फत् घरको वास्तु दोषलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर ।
यदि तपाईंको घर वरिपरि भग्नावशेष भइसकेको घर छ भने तपाईं आफ्नो घरको ढोका नजिकै फिटकिरी पक्कै पनि राख्नुहोस्, यसले नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हुन्छ । साथै, यदि घरको वरिपरी चिहान छ भने पनि फिटकिरीको प्रयोग गर्नुहोस्।
Last Updated on: February 8th, 2021 at 10:34 am